Madaxweyne Uhuru oo sheegay in dhawaan wadankiisa laga qaadi doono xayiraadaha saaran - Awdinle Online
Madaxweyne Uhuru oo sheegay in dhawaan wadankiisa laga qaadi doono xayiraadaha saaran
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shaaciyey in dhawaan si rasmi ah uu uga qaadi doono xayiraadaha saaran wadankiisa ee loo soo rogay sababo la xiriira yaraynta khatarta cudurka Cronavirus oo kiisas badan laga diiwaan gelisay dalkaas.
Isaga oo ka qayb galayey shir looga hadlayay xoojinta ganacsiga Afrika iyo Mareykanka ayaa madaxweyne Uhuru waxaa uu balan qaaday in si deg-deg ah dib loogu furi doono duullimaadyada gudaha dalka Kenya, halka waqti ay qaadan karto, sida uu sheegay in dib loo furo duullimaadyada caalamiga ah ee dalkaas.
Soomaalida dalkaasi ku sugan oo intooda badan ganacsato ah ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay xayiraadaha dowladda ay soo rogtay, iyadoo isu socodka duullimaadyada gudaha uu fursad u noqon karo si ay gancsigooda usii wataan.
Dad gaaraya illaa 6,070 ayey wasaaradda caafimaadka Kenya shaacisay in dalkaasi uu ku soo ritay COVID-19, iyadoo tirada dadka ka bogsaday ay gaarayaan 1971 qofood, halka ay Kenya cudurkaas ugu dhinteen 143 qofood.
Kenya oo weli wajaheysa khatarta xanuunkan ayaa iminka hoggaankeeda waxaa ay il gaar ah ku eegayaan daruufaha dhaqaale ee dadkeeda soo wajahay.
Previous articleGolaha Wakiiladda Puntland oo soo saarey war-saxaafadeed
Next articleCabdullaahi Sheekh Xasan “Runtii waxaan aragnaa in Puntland uu dagaal kula jiro Shacabka Muqdisho”.